Bara 2016: Hammi kaarbon daayoksaayidii olaanaa baqqaana qilleensa keessatti argame - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Hammeentaan kaarbon daayoksaayidii qilleensa keessaa garuu dabalaa jira
Hammi kaarbon daayoksaayidii baqqaana qilleensa lafaa yeroo kamiyyuu caalaa bara 2016'tti sadarkaa olaanaarra gahuu isaa dhaabbanni meetirooloojii addunyaa beeksise.
Hammeentaan daballii kaarbon daayoksaayidii bara darbee isa waggoota 10 darban giddugaleessan dhibbantaa 50'n ni caala.
Akka qorattoonni jedhanitti gochaaleen dhala namaa fi taateen El Niinoo hammeentaan kaarboon daayoksaayidii baqqaana qilleensa lafaa sadarkaa waggoota 800,000 darbaniif mul'atee hin beekneen dabaleera.
Wanti amma ta'e kun karoora addunyaan hamma kaarbon daayoksaayidii qilleensa keessaa xiqqeessuf qabatte milkeessuuf gufuu isa guddaa akka ta'u saayintistoonni himan.
Dhaabbata metirooloojii addunyaatti hogganaa sagantaa sakkata'iinsa baqqaana qilleensaa kan ta'an Dr. Oksana Taaraasovaa "erga dhaabbatichi sagantaa kana eegalee waggoota 30 as daballii hammeentaa kaarbon daayoksaayidii qilleensa keessaa bara darbeen wal gitu goonkumaa hin agarre" jechuun BBC'tti himan.
Kanaan dura hammi kaarbon daayoksaayidii qilleensa keessaa guddate jedhamu bara 1997-1998 kan ture dha.
Goodayyaa suuraa Buufatni qorannoo Haaleey iddoowwan sakkata'iisi baqqaana qilleensaa itti taasifamu keessaa tokko dha
El Niinoon gogiinsa qaqqabsiisuu fi biqiloota magariisaa gogsuun hammi kaarbon daayoksaayidii biqiloonni ofitti fudhatan xiqqeessa.
Hammi gaasii kaarboon daayoksaayidii dhala namaatin gara baqqaana qilleensaatti lakkifamu waggoota muraasa darbanitti xiqqaachuu kan agarsiise ta'ullee dhimmi ijoon hammeentaa waliigalaa gaasiin kun qilleensa keessa jiru dha jedhan Dr. Taaraasovaa.
Hatattamaan dabaluun hamma gaasii kaarboon daayoksaayidii haala qilleensaa jijjiiruu akkasumas lubbu qabeeyyii fi diinagdee irratti miidhaa akka qaqqabsiisu qoratootni himu.
Goodayyaa suuraa Kolombiyaa: Gogiinsi sababa El Niinoon qaqqabu dandeettii biqilootni gaasii kaarboonii xuuxuuf qaban hir'isa
Akka qorattootaatti lafti rukkina kaarbon daayoksaayidii bara darbeen walgitu waggoota miiliyoona sadi hanga shan baranaa keessumeesitee turte.
Yeroo sanatti ho'inni qilleensaa digirii seentigireedii 2-3 dabale ture. Sababa ho'aatin cabbiin Griinlaand fi Aantaarkitikii lixaa baqee sirriin galaanaa meetira 10-20 ta'uun dabalee ture.
Qorannoon dhaabbata meetirooloojii kun dhugaa fi yaaddessaa ta'uusaa qoratootni biroos irratti waliigalu.
Yunvarsiiitii Landanitti hayyuun Rooyaal Hoolowey piroofesar Iyuaan Nisbet, "yeroon waliigaltee Paaris hatattamaan hojiirra oolchinu fi itti fayyadama boba'aawwan uumamaa itti fayyadamuu dhaabuu qabnu amma" jedhan.
Goodayyaa suuraa Buufata sakkata'iinsaa Keep Giriim Awustiraaliyaa: Saayintistii saamuudawwan qilleensaa qabatee jiru
Gabaasa dhaabbata meetirooloojii addunyaa kanaan dhimmi yaaddessaan biraa hammi gaasii miteenii dabaluu isaati.
Hammi gaasii kanaa baqqaana qilleensaa keessa jirus giddu galeessa waggoota kudhan darbanii ol akka ta'e proofesar Nisbet kan himani.
Keessattuu waggoota sadan 2014 hanga 2016 keessatti hammi miteenii baqqaana qilleensa keessaa daran dabaleera.
Mootummoota gamtoomanitti hooganaan dhimma naannoo Eerik Soolheyim "rakkoo kanaaf furmaatawwan ni qabna. Kan barbaadamus fedhii siyaasaa fi dhimmichaaf dursa kennuu dha" jedhan.
Gabaasni dhaabbata meetirooloojii addunyaa kun guyyoota muraasa waltajjii marii dhimmi jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii adeemsifamu dursee bahe.
Prezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp biyyi isaanii waliigaltee Paaris keessaa akka baatu dhaadachaa turanillee hirmaatoonni marichaa Jarman magaalaa Boonitti yeroo wal argan hojiirra oolmaa waliigalttee Paaris irratti ni mari'atu.